Ụzọ Njegharị Ụzọ - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 12 Ngwaahịa maka Ụzọ Njegharị Ụzọ)
Anyị 200w Dusk na Dawn Photocell Led Outdoor Pathway Lights bụ 26000lm, arụmọrụ bụ ruo 130lm / w na-enwu gbaa dị ka ìhè. Ejirila Kits Lunder Ụzọ Kedu na 100-277V ngwa ma na-enwu gbaa ma ọ bụrụ na ịdabere na ya na arụmọrụ dị egwu 120V Led Pathways Lights CRI 85. 200w kedu ụzọ ụzọ ọkụ ọkụ kits r eplaces 600W HPS MH HID....
Anyị na-eme ka Ụlọikpe Tennis DLC na- agba chaa chaa bụ ọrụ zuru oke maka ugbo, yard, ụgbọala, ụzọ ụkwụ, oghere na azụmahịa. Ike a zuru ezu 320W Ogwe ụgbọala na-adọba ụgbọala gbanyere ìhè Kpọrọ ọkụ ọkụ 1000W. Enwere ike ịwụnye Ọdụl 320w Led Street site na iji ihu igwe na-abanye na ụtụtụ ma gbanye na-akpaghị aka...
Ụzọ anyị na-aga n'okporo ụzọ na-abịa na ihe ntanetụ foto nke dusk-to-dawn nke na-achọ ìhè ihu igwe na ike ọkụ na / na-akpaghị aka. Echegbula onwe gị banyere Led Road Light ga-ekpo ọkụ nke ukwuu, Mee ka imepụta ọkụ ọkụ na-eme nke a n'èzí n'èzí Mkpa ọkụ na-adịwanye mma ma na-ekpetụ ọkụ. Ụzọ a 100W okporo ụzọ...
Ngwongwo n'èzí n'èzí n'Ọdọ Ụzọ Ámá Ụzọ Na-adịghị Anya
Ngwongwo n'èzí n'èzí n'Ọdọ Ụzọ Ámá Ụzọ Na-adịghị Anya Egwuregwu Ngwá ojii dị na ya dị ka igwe-ehicha nke ọhụụ na-achọpụta ìhè iji mee ka ọ gbanyụọ. Ejikọta ya na nke 250W na-enwu ọkụ.Our 75W n'èzí n'ìhè na- enye gị ike nke ọma na 9750lm dị elu ma na-enweta ihe dị mma Post Lighting Fixtures mmetụta....
Ụzọ Njegharị Ụzọ Ụzọ 120V Na-enwu Ụzọ Ụzọ kachasị elu okporo ụzọ Ụlọ Nche Ụlọ Nche Ọnụ Ahịa Okporo Ụzọ 150w Ụlọ ahịa Ụlọ Ahịa 100w Ụlọ Ahịa Ụlọ Ọrụ Ọkụ Kasị Ọkụ